विदेशी फ्रान्चाइज खेल्न पाउनुपर्ने उथप्पाको माग- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
विदेशी फ्रान्चाइज खेल्न पाउनुपर्ने उथप्पाको माग
नयाँ दिल्ली — भारतका पूर्वब्याट्सम्यान रोबिन उथप्पाले आफूजस्ता खेलाडीले विदेशी फ्रान्चाइज ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा खेल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले पुरुष खेलाडीलाई विदेशमा फ्रान्चाइज ट्वान्टी–२० क्रिकेट खेल्न अनुमति दिँदैन ।
भारतीय खेलाडीका लागि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्नु एक मात्र विकल्प छ । बीबीसीसँगको कुराकानीमा उथप्पाले भनेका छन्, ‘कृपया भगवान्, हामीलाई विदेशमा खेल्न दिइयोस् ।’
उथप्पाले विदेशमा खेल्न नपाउँदा भारतीय खेलाडीले आर्थिक र अनुभव दुवै आधारमा अवसर गुमाइरहेको दाबी गरे । बीसीसीआईले बिग बास, क्यारेबियन प्रिमियर लिगजस्ता अन्य ठूला फ्रान्चाइज ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा भारतीय खेलाडीलाई खेल्द दिँदैन ।
भारतीय महिला खेलाडीले मात्र विदेशमा खेल्न पाउने गरेका छन् । सन् २००८ मा आईपीएल सुरु भएयता यसका सबै संस्करण खेलेका उथप्पाले विदेशमा खेल्न नपाउँदा आफूजस्ता सबै भारतीय खेलाडी दुःखित रहेको दाबी गरे ।
यसअघि अर्का भारतीय खेलाडी सुरेश रैनाले पनि विदेशी फ्रान्चाइज ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा खेल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । बीसीसीआईको नेतृत्वमा पूर्वखेलाडी तथा कप्तान सौरभ गांगुली आएयता विदेशमा खेल्न पाउने माग सुनिने खेलाडीले विश्वास लिएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:४३
विकासोन्मुख देशमा बढ्दै संक्रमण
जेनेभा — विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संक्रमण विकासोन्मुख देशमा फैलिने क्रम बढेको छ । महानिर्देशक डा. ट्रेडोस एड्हानोम गेहब्रेयससले कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा संक्रमण बढिरहको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो दुई साताभन्दा पनि कम समयमा थपिएका १० लाख संक्रमितमध्ये अधिकांश त्यस्ता देशका छन् । विज्ञहरूले संक्रमितको कुल संख्या परीक्षणको अभावमा कम देखिएको हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘२४ घण्टामा १ लाख ६ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन्,’, डा. गेहब्रेयससले भने, ‘यीमध्ये धेरैजसो कम र मध्यम आय भएका देशहरूका हुन् ।’ डा. गेहब्रेयससले निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूको अवस्थाबाट निकै चिन्तित भएको बताएका छन् । उनले कोभिड–१९ को महामारी अझै लामा समयसम्म चल्न सक्ने बताए ।
दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमणको दर निकै बढेको छ । केही मुलुकले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि संक्रमण बढेसँगै पुन:स्थापित गरेका छन् ।
ब्राजिलमा सबैभन्दा बढी बिरामी भेटिएका छन् । संक्रमितको संख्याका आधारमा ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छ । पेरू, मेक्सिको र चिलीमा पनि संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०६:३३